Home Wararka Dibada Siyaasi Abdiaziz Hassan Amalow yiri Dagaalka social media ka socdo oo ka...
Siyaasi Abdiaziz Hassan Amalow yiri Dagaalka social media ka socdo oo ka dhexeeya madaxweynihii looga adkaaday doorashada iyo Madaxweynihii ku guuleystay
Aqoonyahan ahne Siyaasi Abdiaziz Hassan Amalow ayaa Barta Twitterka ku leyahay ayow ku qoray qoraal hoose Aqri
Waxaa maalmahaan socda arrimaha looga hadlaayo guriga loo dhisaayo Farmaajo iyo abaaraha ba’an ee waddanka ka jira ee uu horkacaya Hassan Sheikh sidii loogu gurman lahaa.
Arrimaha media waxaa moodaa in habka aysan fahmin team HSM maxaa yeelay waxaa laga xaday waqtigii laga hadli lahaa dawlada cusub iyo wax qabadka ay la Imaan doonto waxaa lagu mashquuliyay guri loo dhisaayo Farmaajo .
Arrinkaas uu Farmaajo qudhiisa ka soo copy gareeyay Donald Trump wixii uu ku sameeyay Joe Biden oo ahayd ay rabeen inay media kala wareegaan arrinkii in la dhisaayo Mexico Wall ama Derbigii Mexico oo lacag ay dad shacab ah u aruurinayeen. Arrinkii Biden Team way Fahmeen waxay ku bilaabeen baaritaano oo loo adeegsaday hayadaha amniga iyo maxkamado soo baaro waa taas oo lagu helay lacago si khaldan loo dhacayay oo aan gaarin meeshii loo sheegay dawlada.
Waa inay ku qasbaan Xawaaladaha in ay soo gudbiyaan magacyada lacagaha dadka soo diiraayo oo waxay dad badan leeyihiin dad aanan awoodin baa lacago soo diraayo oo iyagabii baa in lacag loo dhiibo la leeyahay 5% ka gooso inta kale soo dir taas macnaheedu tahay in lacago dalka dibadiisa yaalay dib loogu soo celinaayo in lacagtaas lagu qalqal geliya amaanka iyo dawlada cusub.
Waxaa loo baahan yahay in dadka magacooda lacagta ku soo diraayo loo gudbiyo safaaradaha waddanka ay degan yihiin oo safaaradaha ku yaala Xamar ayaa u gudbinaayo dawladahooda si loo soo baaro dadkaas oo lama ogola inaad shaqsi madax soo ahaa oo rajo ka qabo inuu soo laabto Aad lacag ugu deeqdid waxaa keliya lagu ogol yahay inaa ganacsi ku geshid ama dad dhibaateysan ugu deeqdo oo adiga oo wata dhalasha waddan kale ma ku laalushi kartid qof masauul ahaan jiray oo leh xisbi ka shaqeeya waddan kale.
HSM team waxay ku mashquuleen Xulista Raisal Wasaaraha cusub oo is leedahay mid walba oo xitaa shaqaale ka soo ahaa Xafiiska waqtigii hore ee Madaxweyne HSM uu is leeyahay hadda waa yara dalacday ama is shabihisaa Fahad Yasin oo loogu yeeri jiray Milkiilaha dawlada laakiin waxaan aaminsanahay in arrinkaas uu ka dheregsan yahay HSM oo Somaalidii ay nacday milkiile ama Madaxweyne dad gaar ah leeyihiin.
Farmaajo Team waxay aad u adeegdaseen hab ay isticmaalaan Xisbiga Jamhuuriga ee Mareykanka ama Republican qeybtooda Xag jirka ah ama conservative oo Xisbigaas uu ka mid ahaan Farmaajo markii uu deganaa Mareykanka oo xisbigaas wuxuu dadka u qeybiyaa laba koox oo u ah taageerayaal
Kooxda kowaad waa dadka leh shirkadaha waaweyn ama maalqabeenada ah kuwaas oo taagero in xisbigaan mar walba uu ka shaqeeyo inay bixiyaan Canshuur yar oo mararka qaarkood ay suurtagal tahay in aysan wax canshuur bixinin waxaa kooxdaas ka mid ah dad ajaanib oo dhalashada qaatay iyo dad yar oo madaw oo maal qabeena ah.
Kooxda kale waa dad dan yar ah ama haysta shaqooyin yar yar oo laakiin lagu qalday inay ka wadanisan yihiin muwaadaniinta kale oo qaarka cadaanka waxaa aad loogu adkeeyaa nacayb tira badan inay u muujiyaan dad ay isku heybka ahayn. Farmaajo wuxuu ka midka ahaa dadka shaqooyinka yar yar haysta ee lagu qanciyo inay ka wanaagsan yihiin dadka kale isaga la mid ah.
Waxaa yaab leh dadka xisbigaas ku jira ee dan yarta ah haddii uu xitaa yimaado Madaxweyne dantooda ka shaqeynaya ma taageerayaan oo waxay ku taagan yihiin nacaybkii la baray waxaa inta badan loogu yeeraa Sam’s Club Republican oo loogala jeedo Sam’s club waa dukaan ay inta badan ka adeegtaan dadka dan yarta ah ee dhibaateysan.
Farmaajo wuxuu inta badan isticmaala dad inta badan dan yar ah oo lacag ceyr qurbaha ka qaato oo uu qaar badan ku talaalay nacayb iyo qabyaalad.
Wuxuu isla heli waayay inay taageeraan dadkii ganacsatada ama maal qabeenada ahaa oo uu dhamaan ka dhigtay dad Cadaw ah oo haysta hanti aysan lahayn isaga oo og inay yihiin dad Alla risaaqay oo xoogooda ku xamaasha.
Waxaa loo baahan yahay inaan lagu mashquulin Madaxweyne hore oo waqtigii la geliyo dawlada cusub iyo wax qabadka ay la imaan doonto. Dawladana ay hab sharci ah marsiiso lacagaha soo galaya waddanka haddii aan lagu caawineynin abaaraha.
Previous articleDaawo:- Muqaal”Yaasiin Farey oo ka hadlay kiiskii Ikraan Tahliil iyo arrimo kale oo xasaasi ah
Next articleGudoomiyaha Golaha Samatabixita Gobolka Hiiraan Dr’s maryan xaaji cilmi oo maanta la qaadatay Kulan muhiim ah gudoomiyaha Aqalka sare Abdi hanshi Abdullahi
Xisbiyadii Xasile Haatano,Xaaku Waa Nabade,Xaraaradii Xaga Ururadayxoog Ku Leedahay.
Goob qarsoodi ay Al-Shabaab ugu kaydin jireen ‘alaadaha marin habaabinta’ oo...
Maxay shacabka Jigjiga ka yiraahdeen magacaabista ra’iisul wasaare XAMZA?